Blockchain, Cryptocurrencies နှင့်ဆက်သွယ်ရေး: 2020 အတွက် Outlook | Linux မှ
Este 2020 တစ်နှစ်, ငါတို့ကထုတ်လုပ်အကျိုးသက်ရောက်မှုများကအံ့အားသင့်အားဖြင့်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည် COVID-19 ကူးစက်ရောဂါ (Coronavirus 19)။ ထို့အပြင်လက်ရှိ၊ အနီးကပ်မြင်ကွင်း၊ အထူးသဖြင့်နည်းပညာ၊ အလုပ်သမားနှင့်ဘဏ္financeာရေးတို့တွင်တီထွင်ဖန်တီးမှုနှင့်မြန်ဆန်မှုတို့ဖြင့်ကျော်လွှားရမည်ဖြစ်သည်။
ထိုအဘို့, ကမ္ဘာကြီးနှင့်ဆက်စပ်နည်းပညာများ အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲနှင့်ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်, ကဲ့သို့, Blockchain, Cryptocurrencies နှင့်ဆက်သွယ်ရေးဒီရောဂါအသစ်၏အကျိုးဆက်များကိုကျော်လွှားရာ၌အောင်မြင်မှုအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့လက်ရှိသတိပြုပါ Software များ, ဒါဟာဖြစ်ပါသည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော tool ကို ကျွန်တော်တို့ရဲ့များ၏စစ်ဆင်ရေး လူ့အဖွဲ့အစည်း။ အရာအားလုံးကိုဖြတ်ပြီးကိုင်တွယ်သည် Software များ, နှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်လက်စွဲဖြစ်သောအရာအနည်းငယ်, ဒင်္ဂါးပြားများနှင့်ပုံစံများနှင့်အလုပ်အမျိုးအစားများအဖြစ်, တဖြည်းဖြည်းဒီဂျစ်တယ်လျက်ရှိသည်။
နှင့်သောဒြပ်စင်အချို့ Software များ ပိုမိုအောင်မြင်မှုရရန်၊ လူတွေရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာသည်များမှာ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု, ယုံကြည်မှုနှင့်လုံခြုံရေး အသုံးပြုသည့်အခါထုတ်လွှင့်။ စကားမစပ်ဒီ၏အခြေခံအစိတ်အပိုင်းဖြစ်ကြောင်း Element တွေကို အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲနှင့်ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်နှင့်ဤနှင့်ဆက်စပ်သောမည်သည့်နည်းပညာ, ယန္တရားသို့မဟုတ်နည်းစနစ်။
2 2020 အဘို့အနည်းပညာရှုခင်း
2.1 ပိတ်ပင်တားဆီးမှု Chain
ဒါကြောင့်မတိုက်ဆိုင်တာပါပဲ အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့သည် ဒီအားဖြင့်ဤနောက်ဆုံးဆယ်စုနှစ်၌တည်၏ အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲနှင့်ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်နှင့်ကဲ့သို့သောနည်းပညာများ Blockchain နှင့် Cryptocurrencies, သို့မဟုတ်အခြားဆက်စပ်. ကျွန်ုပ်တို့သည်အခြားယခင်ထုတ်ဝေမှုများတွင်ဖော်ပြခဲ့သောအချက်အလက်များမှာ -
ထို့အပြင်နှင့်အာရုံစိုက် ကျန်းမာရေးကိစ္စလက်ရှိအခြေအနေကြောင့်ဖြစ်သည် အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲနှင့်ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်ပြီးခဲ့သည့်ဆောင်းပါး၌ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း၊ ဤကဏ္ in သည်အလွန်အသုံးဝင်ပြီးအရေးကြီးသည်။ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်- အခမဲ့နှင့် ပွင့်လင်းသောဆော့ဖ်ဝဲသည် တိုက်ပွဲတွင် မည်ကဲ့သို့ ပါဝင်ကူညီသနည်း။.
ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲ နိုင်ငံများစွာ၏အစိုးရများ သူတို့ကအများကြီးယူနေကြသည် အစီအမံ ဆိုးကျိုးနှင့်မကြာခဏသေစေနိုင်သောအကျိုးဆက်များကိုရင်ဆိုင်ရန် COVID-19 ကူးစက်ရောဂါ (Coronavirus 19), ဒါကြောင့်မီးမောင်းထိုးပြကောင်းသည်, အချို့နှင့်ဆက်စပ်သော အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲနှင့်ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ် ၎င်းတို့သည်၎င်းတို့အသုံးပြုမည့်လုပ်ဆောင်ချက်များတွင်ထင်ရှားပေါ်လွင်လိမ့်မည်။
နည်းပညာအသုံးပြုမှု ပိတ်ပင်တားဆီးမှု Chain တိုးတက်မှုရရှိရန်အတွက်အများပြည်သူနှင့်ပုဂ္ဂလိကပိုင်အဖွဲ့အစည်းကြီးများနှင့်အသေးစားအဖွဲ့အစည်းများတွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်တိုးချဲ့လိမ့်မည် operating မော်ဒယ်များနှင့်စီးပွားရေးသို့မဟုတ်လူမှုရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ၏ထိရောက်မှု, လက်ရှိ။ သတင်းအချက်အလက်ဖလှယ်ခြင်း (သို့) ဒီဂျစ်တယ်ဖြင့်ထိန်းချုပ်နိုင်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုစီမံခန့်ခွဲသောလုပ်ငန်းစဉ်များသို့မဟုတ်လုပ်ဆောင်မှုများတွင်အသုံးပြုခြင်းသည် Chains Blockကုန်ပစ္စည်းများ၊ ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်များနှင့်ခြေရာခံနိုင်သည့်ယန္တရားများကဲ့သို့သောကဏ္positiveများကိုအပြုသဘောသက်ရောက်စေလိမ့်မည်။
အကျိုးဆက်အနေဖြင့်၊ ဥပမာ၊ "မျက်နှာချင်းဆိုင်အလုပ်အကိုင်များ" နှင့် "ကြားခံကုမ္ပဏီများ" ကိုအသုံးပြုခြင်းကိုအနည်းဆုံးဖြစ်စေရန်ဤသို့ဖြင့်ကုန်ကျစရိတ်များကိုသက်သာစေပြီးအလွဲသုံးစားမှုနှင့်လူ့အမှားများကိုလျှော့ချနိုင်သည်။
ဒါ့အပြင်ယခုသော "ဒေတာ" အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုသို့မဟုတ်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး တစ်ယောက်၏အရင်းအမြစ်နှင့် / သို့မဟုတ်အလွန်တန်ဖိုးရှိသောပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်သည့်နည်းပညာကိုအသုံးပြုခြင်းဟုသတ်မှတ်သည် ပိတ်ပင်တားဆီးမှု Chain သိုလှောင်ရန်၊ ကာကွယ်ရန်နှင့်အသုံးပြုရန်အတွက်၎င်းသည်ကမ်းလှမ်းထားသောကြောင့်ထိရောက်သောနှင့်လုံခြုံသောနည်းလမ်းတစ်ခုကိုအာမခံပါသည် ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုမရှိသောနှင့် encrypted စနစ်, ထိုသို့များအတွက်စံပြသော။
နောက်ဆုံးတော့နည်းပညာကတည်းက ပိတ်ပင်တားဆီးမှု Chain ၏ဒြပ်စင်နှင့်အတူ, နှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုသောအမည်မသိသင်တန်းသားများအကြားယုံကြည်စိတ်ချရသောအပြန်အလှန်နိုင်ပါတယ် အသုံးပြုသူ authentication ကို, ငွေပေးငွေယူ validation ကိုနှင့်မပြောင်းလဲနိုင်သောအရာများမှတ်ပုံတင် တစ် ဦး အတွက်သတင်းအချက်အလက်၏ ဒီဂျစ်တယ်လယ်ဂျာအဓိကကုမ္ပဏီများ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများ၊ လူများနှင့်၎င်းတို့၏လှုပ်ရှားမှုများ၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုချိတ်ဆက်ရန်ပြproblemsနာမရှိဘဲဆက်သွယ်မှုကိုအကောင်းဆုံးအသုံးပြုနိုင်သည်။
ဘယ်ဖြစ်နိုင်ခြေကို ဦး ဆောင်လမ်းပြပေးနိုင်သည် ဒီဂျစ်တယ် ဥပမာ - မည်သည့်စီးပွားရေးပုံစံနှင့်အလုပ်လုပ်ပုံမဆို၊ စမတ်စာချုပ်များပါဝင်ပတ်သက်သူတစ် ဦး ချင်းစီ၏အချက်အလက်များကိုပိုမိုထိန်းချုပ်နိုင်သည်။
ယင်းကြောင့် Cryptocurrencies, အလှည့်အတွက်နည်းပညာအားဖြင့်ထောက်ခံကြသည် ပိတ်ပင်တားဆီးမှု Chainသင်သည်အကောင်းဆုံးစံနှုန်းကိုကမ်းလှမ်းသည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပိုက်ဆံ၏အသုံးပြုမှုကို minimizeနှစ်ခုလုံးကအကြံပြုထားတဲ့အတိုင်းအတာ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ (WHO) ကများစွာသောအဘို့အ အစိုးရများ၏ပြန့်ပွားကာကွယ်တားဆီးဖို့ Covid-19.
ထို့အပြင်ဤသည်များ၏ပေးချေမှုခွင့်ပြုသို့မဟုတ်လွယ်ကူချောမွေ့ ကန်ထရိုက်တာသို့မဟုတ် "အလွတ်တန်း" ဝန်ထမ်းဝေးလံခေါင်သီသောဒေသများရှိတိုင်းပြည်များတွင် ငွေပေးချေမှုအခြေခံအဆောက်အအုံကန့်သတ်ထားသည်, အ စီးပွားရေးနှင့် / သို့မဟုတ်ငွေကြေးမတည်ငြိမ်သောဖြစ်ကြသည်သို့မဟုတ်ပါကဖြစ်ပါတယ် Hard Access ခေါင်းစဉ်များအရ ပိတ်ဆို့မှုများနှင့်လုပ်ကွက်များအချို့နိုင်ငံများတွင်အခြားသူများကိုဆန့်ကျင်။
ယင်းကြောင့် teleworkingဖြစ်စေနည်းပညာကိုသုံးနိုင်သည် ပိတ်ပင်တားဆီးမှု Chain သို့မဟုတ်အချို့သောအခြား အခမဲ့နှင့်ပွင့်လင်းနည်းပညာ ဖြစ်နိုင်ရင်, ပိုမိုမြင့်မားအဆင့်ဆင့်လွယ်ကူချောမွေ့ခြင်းနှင့်အာမခံရန် ပွင့်လင်းမြင်သာမှု, ယုံကြည်မှုနှင့်လုံခြုံရေး ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်စစ်ဆင်ရေးအတွက် VPN ကွန်ယက်များနှင့် / သို့မဟုတ် GNU / Linux လည်ပတ်မှုစနစ်များရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်လျော့ပါးစေရန်နှင့်မလိုအပ်သောလူများကိုလွှဲပြောင်းပေးခြင်းသည်အဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့်အစိုးရများ၏အကြံပြုထားသောအတိုင်းအတာနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်၊ Covid-19.
တိုတိုပြောရရင်သူမှာလုပ်စရာတွေအများကြီးရှိနေသေးတယ် အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲနှင့်ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်အထူးသဖြင့်ချက်ချင်းအတွက် အကျိုးကျေးဇူး၊ တည်ငြိမ်မှုနှင့်လူသား၏အောင်မြင်မှု, ကနေပေါ်ပေါက်ဒီအကျပ်အတည်း၏အလယ်၌ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ 2019 (ကိုဗစ် 19).
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" အလွန်ဖြစ်နိုင်ခြေအကြောင်းကို «Panorama tecnologico, social y laboral» ဒီကာလအတွင်းရင်ဆိုင်ရပါလိမ့်မည် 2020 တစ်နှစ် ၏စင်မြင့်နှင့်အတူ COVID-19 ကူးစက်ရောဂါ (Coronavirus 19)ခေတ်မီနည်းပညာများသည်အရှိန်အဟုန်ဖြင့်မြင့်တက်လာလိမ့်မည် «la Blockchain, las Criptomonedas y el Teletrabajo»တစ်ခုလုံးအတွက်, အလွန်အကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုဖြစ်ပါတယ် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » NOTICIAS » Blockchain, Cryptocurrencies နှင့်ဆက်သွယ်ရေး: 2020 များအတွက် Outlook
Firefox 75: သတင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအဆင့်သို့ဆက်သွယ်ပါ
Zorin OS 15.2 သည် Linux Kernel 5.3 နှင့်အတူရောက်လာသည်